हे पण्डित महानुभावहरु हो ! आज रक्षाबन्धन, जनैपुर्णिमा । हाम्रा लागि आषाढ शुक्लपुर्णिमा, ब्यासपूजा, गुरु पुर्णिमा भए पनि यजमानहरुलाई आजको दिन गुरु पुर्णिमा हो । आज हामीहरु घरघरमा गएर आफूले गुरु कृपाले प्राप्त गरेको ज्ञानगुण यजमानहरुलाई बाँड्ने दिन र संस्कृत दिवस पनि हो ।
आदरणीय पाठकवृन्द ! आषाढ शुक्लपक्षको एकादशीदेखि कार्तिक शुक्लपक्षको एकादशीसम्म चतुर्मास भनिन्छ । यो चार महिना अवधिभर भगवान श्री विष्णु क्षीर सागरमा गएर सुत्छन् भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यता छ । शास्त्रलाई मान्ने र आषाढ शुक्ल पक्ष एकादशीमा सुते, कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशीमा उठे भनेर पुस्तौंदेखि मानिआएका हामीलाई त समाधान चाहिएकै छैन । तर, अहिलेको भौतिकवादी संसार जो आफूलाई सर्वोत्कृष्ट अन्वेषक भन्दछ, उसले क्षीर सागर भेटेकै छैन । खोज्न छोडेको पनि छैन । त्यस्ता नयाँ वस्तुको खोजी गरेर निकाल्ने वैज्ञानिकहरुका पनि पुस्तौं बिते ।
क्षीरसागरमा भगवान विष्णु सुत्छन् भन्ने अध्यात्मवादी पण्डित महाशयहरु र क्षीर सागर नै छैन । भगवान विष्णु नै छैनन् भन्ने भौतिकवादी वैज्ञानिक महाशयहरु तपार्इंहरुको साँढे जुधाईले संंसारको उपकार भएको छैन, बरु उल्टै हानी भएको छ ।
अब हामी फेरि फर्केर चतुर्मासको आरम्भबाट अध्यात्मवाद र भौतिकवादको मल्लयुद्धको समाधान खोज्न पट्टी लागौं । आषाढ महिनालाई मुरी खाएर मानो उब्जाउने भनिन्छ । यस्तो समयमा जसका अंशका अंश भएर देवता पशुप्राणी र मानवहरुको सृष्टि भएको छ ः
यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ् नरादय ः श्रीमद्भागवत् १÷३÷५
त्यस्ता भगवान विष्णु चार महिना सुत्लान् त ? त्यतिबेला मानिस मात्र नभएर तिर्यक योनीमा जन्म लिएका राँगागोरु पनि एकमुठो घाँस खाएर एकमाच पराल उब्जाउने लागेका हुन्छन् । त्यसैले चार महिना भगवान सुत्छन्, सत्य हो ( शास्त्रको आधारमा) । हामी भगवानका अंशहरु पनि सागरमा सुतेका हुन्छौं ( भनाईको तरिका पुर्याउन जान्दा) ।
नरको विकास भएर एक कोशेढुङ्गो पार गरिसक्दा नरबाट नारायण बन्दछ । माथि भनिएका प्राणी मानिस, पशु, राँगागोरुमा मानिससँग लागेर राँगागोरु पनि कर्मनिष्ठ भएर मुठो खाएर माच उब्जाउन लागेका छन्, आफ्ना विवेक र बुद्धिले चाँहि होइन । त्यसैले मानिस विवेकशील प्राणीले बोल्दा कथामा भनेको त हो नि भनेर जे पायो त्यही भन्नु हुँदैन । सत्यतथ्य बोल्नु पर्छ ।
आदरणीय पाठक महोदय ! तपार्इं अध्यात्मवादी पण्डित (व्यासासनबाट ओर्लिन नमान्ने, सधैं पुराण मात्रै खोजी हिँड्ने) भए पनि, कहाँ छ क्षीर, कहाँ छन् विष्णु ? भनेर हिरण्य कशिपुको जस्तो खोजी गर्ने बैज्ञानिक भए पनि यो मल्ल युद्धविराम गर्नु आजको आवश्यकता हो । (म अल्पज्ञको विचारमा)
संस्कृत भाषामा एक शब्दका अनेक अर्थ लाग्छन् । जस्तैः गो गणै र्पीडयमानो हं गौ र्नष्टा ममः गो पते । यो वाक्य आफ्नो मृत्युको समयको प्रतिक्षा गरेर वाणको ओछ्र्यान बनाएर सुतेका भीष्मपितामहको हो । यहाँ एउटै गो शब्दको अर्थ हे ! गाईका मालिक भनेर कृष्णलाई सम्बोधन गरेको छ । त्यसैले गाई भएको हो । गौ नष्टा मेरो बोली हरायो भनेर वाणीलाई भनेको छ । गो गणै भनेर गौ शब्दले वाणलाई बुझाएको छ ।
अब हामी शीर्षकमा भएको केही समाधानतर्फ पाइला बढाऔं । संस्कृत भाषामा एक शब्दका अनेक अर्थ लाग्छन् मात्र होइन, अनेक शब्दले एउटै वस्तु पनि बुझाउँछ । जसलाई हाम्रा नेपाली विषय पढाउने शिक्षक शिक्षिकाहरु पर्यायवाची शब्द भनेर विद्यार्थीहरुलाई बुझाउनु हुन्छ ।
यो अध्यात्मवाद र भौतिकवादको मल्लयुद्धमा पानीको पर्यायवाची शब्दलाई मात्र ठीक ठाउँमा प्रयोग गर्दा पर्याप्त हुन्छ । (अम्भोर्णस्तोयपानीय नीर क्षीरम्बु शम्बरम्–इत्यमरः)
अम्भः अर्णः तोयम्, पानीयम्, नीरम् क्षीरम्, अम्बु, शम्बरम्
संस्कृत माताकी जेठी छोरी नेपाली भाषामा पानीयम् चाँहि पानी भएको हो । क्षीर पनि पानी हो । अब चतुर्मासमा भगवान विष्णु क्षीर सागरमा सुत्छन् भन्ने शास्वत सत्य शास्त्रको भनाईलाई दूधको सागर नभनेर पण्डितहरुले पानीको सागरमा सुत्छन् भन्नु पर्छ (समाधानको उपाय १) । भगवान विष्णु पानीमा सुत्ने समयमा हामी पनि राति नभनी खेतीमा ध्यान दिनु पर्छ । (समाधानको उपाय २) । भगवान विष्णु पानीमा सुतेका छन् । त्यसैले पानीबाट दूध निकालेर हामीलाई पाल्छन् ( धानमा पहिले दूध हुन्छ पछि चामल (स.उ. ३) ।
अनिमात्र शंकराचार्य हरिरेव जगत जगदेव हरिः सत्य प्रमाणित हुन्छ । चतुर्मासको मध्यावधि भाद्रशुक्ल एकादशीदेखि अगुवा धानमा दूध पस्न शुरु भएको हुन्छ । यो एकादशीलाई परिवर्तिनी एकादशी पनि भनिन्छ । दोस्रो दिन वामन द्वादशी पनि भनिन्छ । उनै वामनले बलिसँगको त्रैलोक्य राजकाजबाट इन्द्रलाई स्वर्ग दिएर आफू उपेन्द्र भएर बस्नु मञ्जुर गरेका थिए । यी सबै हाम्रा कथा, आख्यायिकाहरुले अप्रत्यक्षरुपमा बालकलाई गुलियो औषधि खुवाए जस्तो हामीलाई शिक्षा दिएका छन्, झुट्टा होइनन् ।
क्षीर सागरमा भगवान सुत्नुको अर्थ दूधको सागरमा सर्प ओछ्र्याएर सुतेका छन् भन्दा वैज्ञानिक तथ्यले मान्दैन । बरु भगवान पानीको समुद्रमा छन्, हामी पनि उजका सन्तति हुनाले उनी जस्तै क्रियाशील बनौं, सर्प विच्छी भएका घाँस सेउलाको ओछ्यानबाट सर्प विच्छी धपाएर खेतमै रात कटाउँ भन्दा उपयुक्त होला । भगवान चार महिना सुत्ने, कुम्भकर्ण छ महिना सुत्ने, उस्तै उस्तै रहेछन् भन्ने भ्रम पनि स्रोता सज्जनमा पार्नु हुँदैन ।
चतुर्मासको अवधिमा चतुर्मास पुराण पनि लाग्ने गर्दछ । चतुर्मास पुराण सुन्न जाँदा पुराणमा लेखेको सबै सुन्न बुझ्न पाइन्छ भनेर स्रोताहरु पनि धेरै जम्मा हुन्छन् । सप्ताह, नवाहमा जस्तो हतारो पनि हुँदैन । श्लोकको अर्थ लगाउँदै जाँदा जमदग्नि ऋषिको शिर काटेर लिएर गएका हैहय वंशका अर्जुनका छोराहरुसँगबाट जमदग्निका कान्छा छोरा पर्शुरामले शिर ल्याएर जमदग्निका शरीरमा जोडे भन्ने पनि सुन्न पाइन्छ ।
पितुः कायेन सन्धाय शिर आदाय बर्हिषि ।
सर्वदेवमयं देवमात्मानमयजन्मखैः ।। श्रीमदभागवत ९÷१६÷२०
यो श्लोकको पनि अर्थ भ्रामक छ । कुरो सत्य हो । तर, शरीरमा जोडे मात्र भन्दा स्रोताको जिज्ञासा काँचै रहन्छ । जोडेर विधि विधानले सद्गति गरे भन्न भुल्नु हुँदैन ।
अन्त्यमा गएर हाम्रा पूर्वज महर्षिहरुले हामीलाई वेद, पुराण, संहिता छोटकरीमा भन्नु पर्दा संस्कृत भाषारुपी जननी दिएर गए । संस्कृत भाषा जननीलाई हामीले मार्यौं । आमा मरेका घरमा चुलामा आगो कसले फुक्ने ? घरमा चुलोमा आगो नबलेपछि छोराछोरी अर्काका घरमा केही पाइन्छ कि भनेर जानु स्वभाविक नै हो । दिएको जुठोपुरो खाएर दिनेको गुनगान गर्नु पनि स्वभाविक नै हो । र, भन्नुपर्छ भने वैज्ञानिक तथ्यले मान्ने शास्त्रसम्मत कथावाचन गरौं नभए हामीहरुले गुमेका वस्तु प्राप्त गर्न चतुर्मासभरि नै निर्जल र निराहार रहेर तपस्या गर्नुपर्ने दिन आएका छन् ।
हे पण्डित महानुभावहरु हो ! आज रक्षाबन्धन, जनैपुर्णिमा । हाम्रा लागि आषाढ शुक्लपुर्णिमा, ब्यासपूजा, गुरु पुर्णिमा भए पनि यजमानहरुलाई आजको दिन गुरु पुर्णिमा हो । आज हामीहरु घरघरमा गएर आफूले गुरु कृपाले प्राप्त गरेको ज्ञानगुण यजमानहरुलाई बाँड्ने दिन र संस्कृत दिवश पनि हो । आजैदेखि संस्कृत भाषा जननीको सेवा गरे वैज्ञानिकहरुले झुट्टा भनेका कथालाई सत्य सावित गरेर देखाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने क्षीण आशाको तृण समातेर के कति दिनलाई हो लेखनी विश्राम गर्दछु ।
मेचीनगर–९, खुट्टीडाँगी (झापा)
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमवार, साउन १९, २०७७ ०७:१३:४७
लकडाउन मात्र गरिरहने कि बिकल्प पनि खोज्ने हो सरकार !